Ngemuva kwamaholide wezinsuku ezingama-40 waseChinese Umkhosi oqhutshwe isikhathi eside, oholwa nguCovid-19, uForsetra ubuyile futhi waphinde wavula kabusha ukukhiqizwa ngomhlaka 20 kuFebhu. Ethintwe yiCritona hit yaseCoronavirus, abasebenzi abakwazanga ukuphinda basebenze ngokugcwele, futhi nokuhlinzekwa kwabahlinzeki kwethu okwanele ...
ngu admin ku 20-04-08
NgoJuni 19-21, 2019, i-Hangzhou Forsetra Roof Tile Co, Ltd. yabamba iqhaza kwi-International Trade Week eGhana. Imikhiqizo yethu yamukelwa kahle embukisweni futhi yabikwa ngabezindaba abakhulu bendawo. UHenry, umphathi wethu woMnyango we-Oversea, njengommeleli wezinkampani ezibonisa, uShar ...
I-Hangzhou Forsetra Roof Tile Co, Ltd. ibambe iqhaza kwi-International Trade Week eGhana
NgoJuni 19-21, 2019, i-Hangzhou Forsetra Roof Tile Co, Ltd. yabamba iqhaza kwi-International Trade Week eGhana. Imikhiqizo yethu yamukelwa kahle kulowo mbukiso futhi yabikwa kwabezindaba ezinkulu zasekhaya. Inani elikhulu lezivakashi libonise isasasa elikhulu emikhiqizweni yethu kanye nama-oda ...